အားလုံးအတှကျရေ - Outilsdecuisine.com
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာတကယ့် "ရေငတ်" ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ ကျနော်တို့သောက်ရေများများရှိသည် - ပင်သန့်ရှင်းသောကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သာရေလောင်း!
ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူအတော်များများကြောင်းဇိမ်ခံစရာမလိုပါ။ နေ့တိုင်းလောက် 1 400 ကလေးများအန္တရာယ်မကင်းရေကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်ရောဂါများနှင့်ဆင်းရဲသောသန့်ရှင်းရေးကနေသေဆုံး။ ဒါဟာအမှန်တရား 2018 မဖြစ်သင့် ...
ထိုကဲ့သို့သောတူးရေတွင်းအဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်စမ်းရေတွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိုင်းအဝိုင်းသန့်ရှင်းသောရေများကိုကူညီ BioSand filter များ၏, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ဤသည်ကိုအတိအကျဘာ CharityWater အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ site ကို www.outilsdecuisine.com ထိုအကြောင်းကြောင့်ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နှင့်လူအပေါင်းတို့အားသောက်ရေများကိုအဖွဲ့အစည်း CharityWater ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
link ကိုကိုယ်နှိုက် (မဖက်), ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်ရေချက်ပြုတ်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်သိတယ်မရှိပါ!
, သင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဆေးကြောဖို့ (တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအိုး၌ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်ဖို့ကြိုးစား!) သင့်ရဲ့အစားအစာအချို့ကိုအပူဖို့, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမိမိတို့အဘို့ဖွစျစေ, ရေမရှိဘဲပြုထားတဲ့ တွန်းနိုင် ...
ဒါကရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်အကြားဘုံအချက်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သိသာရေလိုအပ်မှုကြောင့်ကျော်လွန်သွားပါကအသက်တာကိုမှရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ရှင်သန်မှု (က Mike ဦးချိုကိုမေး!) ။ အဝတ်လျှော်များအတွက်ရေ, ချက်ပြုတ်ဘို့ရေ, အရက်သောက်ဘို့ရေကို, အထူးသဖြင့်အမြားအပွားရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သောက်ရေ ...
သငျသညျစာမစားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အရက်သောက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ရှင်သန်ရန်မဖြစ်နိုင်ဆနျ့ကငျြဘပါ! ရေဆုံးရှုံးလျှင်ခန္ဓာကိုယ်3ရက်ပေါင်းထက်အများကြီးပိုပေါ်ကိုင်ထားလို့မရဘူးလို့ပဲ။ ကျနော်တို့ချွေး, အသက်ရှူနှင့်ဆီးဒကယ်ဆယ်ရေးများကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေနီးပါး2လီတာရှုံးသည်။
ဒါဟုတ်တယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်တွေ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆပ်ဖို့ဥပဒေကြမ်းများ, (နိုင်သောသူတို့အဘို့) ကြှနျုပျတို့၏သားသမီးတို့အဘို့ပေးအားလပ်ရက်, ပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကိုအခြားသူများစဉ်းစားမတိုင်မီငါတို့နှင့်ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ထင်ရှိသည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ယူရိုပေးနိုင်ပါသည်ပင်လျှင်မူကားပြုရမည်ဖြစ်သည်! ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဝကိုမပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အစားကတစ်နေရာရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအများအပြားကလူကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ် ...
>> ဒီ website တွင်ထားရှိတစ်ဦးချင်းစီအမိန့် 5% ဒါနရေလှူဒါန်းခဲ့သည်။
100 ဒါနရေမှစလှေတျတျောငွေ% ရေစီမံကိန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်, သူတို့ပြီးစီးသောအခါ, CharityWater ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံများပေးပို့နဲ့ GPS ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ကျနော်တို့လှူဒါန်းခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်သြဒိနိတ်အပေါင်းတို့, (များသောအားဖြင့် 21 လအတွင်းကင်ပိန်း၏အဆုံးပြီးမှ, ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ကောင်းစွာဒီတစ်ခုကဲ့သို့တည်သည်မဟုတ်!) set ကို။ သငျသညျပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်းများကို (၏မြေပုံမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စိတ်ကူးတစ်ခုရရှိရန်https://www.charitywater.org/our-projects/completed-projects/).
ကျွန်တော်တို့ဟာရေပြဿနာပေါ်မိနစ်အနည်းငယ်ရပ်တန့်တနေ့ကြှနျုပျတို့သညျဤပွညျကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်နေသောသူသည်ရေကိုသောက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်းရစိတ်ကူးလျှင်, သင်ချွေတာအပြင်ကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ ကျနော်တို့အတိမ်အနက်အတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပြီဘဝတွေကို: အစားရေရယူ၏ကျောင်းကိုသွားရသူကလေးငယ်များပိုကောင်းတဲ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်သူသားဖြစ်ကြ၏, သူတို့က၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုကြီးထွားမည်, ထို့ကြောင့်အများကြီးလျော့နည်းဆင်းရဲမွဲတေမှု, ထွက်ပြေးနည်းပါးလာစစ်ပွဲများ (ကံမကောင်းအမြဲအခြားအကြောင်းရှိပါလိမ့်မည်) .... (ရိုးရှင်းသော) ဒီရူပါရုံကို utopian ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအခွင့်အလမ်းထိုက်!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖတ်ပါနှင့်ရန်အချိန်ယူဘို့ ထိုအကြောင်းကြောင့်မှလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ (သင့်အမိန့်မှတစ်ဆင့်), သင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့နှင့်သင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
CharityWater အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်၎င်း၏မစ်ရှင်နှင့်ရေပြဿနာများကိုနားလည်, ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု: